Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Eze Spain nwere ozi dị mkpa maka ndị nnọchi anya UNWTO, Spain na njem nlegharị anya
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Network Tourism Network toro Eze Spain maka nkwado ya maka UNWTO na njem nlegharị anya ụwa
Eze nke Spain na-egosi nkwado siri ike maka UNWTO dịka nhazi
Njem nlegharị anya bụ Royal Business na Spain.
Mgbakọ UNWTO na-abịa n'ihu nwere ike bụrụ ihe dị ịrịba ama maka ụlọ ọrụ na nsogbu - Njem Nlegharị Ụwa.
Spain ghọtara nke a, bụ obodo mba World Tourism Organisation (UNWTO).
Ọ dịghị onye ọzọ ma e wezụga Eze Ukwu ya, Majesty Felipe VI, Eze nke Spain, na-aghọta mkpa njem nlegharị anya maka obodo ya na ụwa.
Ọ makwaara na ọ dị mkpa ka mba ndị ọbịa nke otu UN nọgide na-anọpụ iche. Maka Eze, ịnabata nri abalị maka ndị nnọchi anya UNWTO na-ezigakwa ozi na enwere ike ịme ntuli aka nzuzo na nzuzo na Spain.
Spain na nso nso a malitere ịkpụzi ọdịnihu njem nlegharị anya na FII na Riyadh, Saudi Arabia.
Nke mbụ-mgbe otutu mba, multi-stakeholder Tourism Coalition bụ kpakpando ọhụrụ na COP26 na Glasgow, mgbe Spain jikọtara ya na mba 9 ndị ọzọ ka ha bụrụ onye mmekọ na mmekorita a.
Ọchịchị eze nke Spain, ma ọ bụ ọchịchị eze Spen, nke a na-akpọkarị The Crown, bụ ụlọ ọrụ iwu na ụlọ ọrụ kacha elu nke Spain. Ọchịchị na-achị gụnyere eze na-achị achị, ezinụlọ ya na ndị otu ezinaụlọ nke na-akwado ma na-enyere eze aka n'ịrụ ọrụ na ikike ya.
Dị ka onye nọ n'ọkwá ya na ogo ya, Eze nke Spain nwere ike igosi ozi dị mkpa nke ịkwado ụlọ ọrụ (njem njem), na ụlọ ọrụ. (UNWTO), na-enweghị ọdịdị nke nnyonye anya, nkwado, ma ọ bụ jụ n'okwu ndị dị ka akwụkwọ vootu nzuzo maka nkwenye nke odeakwụkwọ ukwu.
Ya mere, inwe onye ukwu ya na-anabata nri abalị maka ndị nnọchiteanya na UNWTO General Assembly na-abịa site na gburugburu ụwa na-egosi ozi nnọpụiche ya na-agbachi nkịtị ma bụrụ nke a pụrụ ịhụ dị ka nnukwu nkwado maka njem nlegharị anya n'ụwa n'ozuzu ya.
The Network Njem Nleta Ụwa ghọtara mkpa njem a dị ma wepụta nkwupụta a taa.
Nzaghachi WTN na nkwado nke onye nwe ya, onye isi ala Felipe VI, Eze Spain, maka njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Honolulu, Hawaii, USA – World Tourism Network chọrọ igosipụta ekele dị ukwuu n'ebe Onye nwe ya Felipe VI, Eze Spain, maka nkwado ya na njem nlegharị anya.
Dr. Peter Tarlow, Onye isi ala WTN, na Dr. Taleb Rifai, WTN Patron na onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO, kwuru na onye nwe ya arụwo ọrụ iji kwado ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru oke, na dịka onye toro eto siri dị, ọ gbanarị nkwado onwe ya.
Eze Felipe VI arụsiwo ọrụ ike iji weta ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
WTN na-ekele Eze Felipe VI ma kwupụta obi ụtọ ya maka ihe niile Eze mere maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya n'ụwa.
World Tourism Network (WTN) bụ olu agafeela ogologo oge nke obere azụmaahịa na njem nlegharị anya n'ụwa niile. Site n'ijikọta mbọ anyị, WTN na-ebute ụzọ mkpa na ọchịchọ nke obere azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa na ndị na-etinye aka na ha. Ọ bụghị naanị WTN na-akwado ndị otu ya mana ọ na-enye ha olu na nnukwu nzukọ njem nlegharị anya. WTN na-enye ohere na ịkparịta ụka n'Ịntanet dị mkpa maka ndị otu ya na mba 128. Ozi ndị ọzọ: www.wtn.travel